राशिफल Archives - Enepal Serofero
यी ५ राशिका लागि सबैभन्दा राम्रो छ नयाँ बर्ष २०१९, हेर्नुहोस् तपाईंको वार्षिक राशिफल…सेयर गर्
मेष राशिको राशिफल २०१९ मेष राशिफल २०१९ का अनुसार मेष राशिका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अस्थिर रहने छ। यो वर्ष तपाईँका लागि मिश्रित फलदायक छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर संवेदनशील रहने हुनाले वर्षको प्रारम्भमा स्वास्थ्यसम्बन्धी लाभ हुने अवसर छन्। यस अवधिमा, तपाईँले सानातिना तनावहरूलाई त्याग्नु भयो भने तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो रहने छ। यस वर्ष आफ्नो करियरका प्रसङ्गमा तपाईँले मिश्रित फल प्राप्त गर्नुहुने छ। आफ्नो उत्कृष्ट प्रयासले गर्दा नै तपाईँ सफल हुनुहुने छ। तपाईँको नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना छ। तपाईँको करियरलाई अर्को स्तरसम्म पुऱ्याउनमा भाग्यले साथ दिने छ। वर्षको प्रारम्भदेखि नै, आफ्ना योजनाहरूमा तपाईँले कडा मिहिनेत गर्नुहुने छ, जसले तपाईँलाई भविष्यमा फाइदा हुनेछ। आर्थिक स्थितिमा अस्थिरताको परिदृश्य देखिने छ। वर्षको सुरुमा, तपाईँको आर्थिक स्थिति बलियो भए पनि यस समयमा तपाईँको व्यय बढ्ने छ। ह
बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्तो छ मुख्य कारण !
Posted in मनोरंजन, राशिफल
धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ त ? यो कुरा यहाँ भनिनेछ । एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगाएको छ । एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुल्न आएको छ र यो सुनेर तपाइँको होश उड्छ । यो सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले गरेका थिए । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो । - from : Dailygorkhali.com
साप्ताहिक राशिफल : यस्तो रहनेछ तपाईँको यो साता, हेर्नुस् कसरी वित्नेछ? (भिडियो सहित)
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) साताको उत्तरार्धका दिन अनुकूल रहनेछन् । शनि, रवि, सोमबार निकै खर्चिलो रहन सक्नेछ । मंगल, बुधबार धनधान्य र मधुर वाणीले परिपूर्ण गराउनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार सर्वाधिक व्रिmयाशील रहनेछ । बोलीवचनमा प्रभाव बढ्नेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) साताको सुरु र अन्तिमका दिन अनुकूल रहनेछन् । शनि, रवि, सोमबार सबै प्रकारले लाभदायक रहनेछ । मंगल, बुधबार मुख्य काममा व्यवधान बढ्न सक्छ । धैर्य गर्नु बेस हुनेछ । बृहस्पति, शुक्रबार उच्चस्तरीय कार्यप्रदायक रहनेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) साताको सुरु देखिका अधिकांश दिन अनुकूल रहनेछन् । शनि, रवि, सोमबार कडा संघर्षपूर्वक आटेको काममा सफलता मिल्नेछ । मंगल, बुधबार प्राप्तिका स्रोतहरु खुल्नेछन् । बृहस्पति, शुक्रबार ठूलो योजनाको काममा हात नराख्नु नै बेस हुनेछ । कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) साता अनुकूल रहनेछ ।
मनोरोगी महिला समेत बलात्कारको शिकार, न बलात्कारी चिन्छन् न जन्मेका सन्तान। सलाम स्नेही काख !(भिडियोसहित)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३१२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको विशेष एपिसोडमा विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः १. सुधारगृहका पूर्व कर्मचारी सुदिप ढुंगानाका अन्य करामत पनि हेर्नुहोस् ! (फलोअप) काठमाडौं । सुकेधारास्थित ट्रान्सफरमेशन नेपाल प्रा.लि. नामक सुधारगृहमा बस्नेहरुसँग सञ्चालकले अमानविय कार्य गर्दै आएको हामीले देखायौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कमचारीहरुले उक्त सुधारगृह निमय अनुसार चलेको भनेर अनुगमन रिपोर्ट पेस गरेपछि प्रहरीसहित अनुगमन गराएपछि २१ जनाका उद्धार भएको थियो । २१ जनाको उद्धारपछि थप एक किशोर माथि सुधार गृहका पूर्व कर्मचारी सुदिप ढुङ्गानाले दुव्र्यवहार गरेको खुलेको छ । काठमाडौंका एक १४ बर्षीय क
धनु राशिका मानिसहरुका स्वभाव र भविष्य कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस !
काठमाडौँ। धनु राशिका मानिसहरु विशेषत: सत्यमा विश्वास गर्छन र सधैं सत्यको खोजीमा रहन्छन। यस राशिको प्रतीक धनु हो। यस राशिको जीवनमा ज्ञान र गति प्रतिको दृष्टिकोण व्यापक हुन्छ। हसिमजाक गर्ने लापरवाही स्वभावका, उत्साही यस राशिका मानिसहरु आरामदायी जीवन व्यतीत गर्नमा बढी केन्द्रित हुन्छन। दार्शनिक र धार्मिक दिमागका धनु राशिका मानिसहरु जीवनको अर्थ खोज्नमा इच्छा राख्छन। उनीहरु स्पष्ट विचारक हुन्छन, र उनीहरु दोस्रोले उनको विचारपूर्वक गरिएको कुरामा सहमति जनाएमा खुशी हुन्छन। तर उनीहरु कहिलेकाहीं तार्किक, मन्दबुद्धि र कठोर पनि हुन्छन। उनीहरु उत्साहीपूर्ण कुराहरु गर्न खप्पिस हुनुको साथै एक उत्साही श्रोता पनि हुन्छन। उनीहरु आफ्नो ज्ञानको घमण्ड शान्त गर्नका लागि दोस्रोको कुरालाई ध्यान दिएर सुनी सूचना एकत्रित गर्छन। उनीहरु ज्ञानको खोजीमा अनन्त दुनियाँमा घुम्न चाहन्छन। यदि उनीहरुलाई रोक्न खोजियो भने
मनोकामना माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन भनी एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुनेछ । सम्पत्ति लाभ गर्न अनुकूल प्रयास हुनेछन् । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ । साझेदार वा सहयोगीको सङ्गतले फाइदा हुने काम गरिने छ । व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ । दूरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट र रामरमाइलो गरिने छ । सोच्दै नसोचेको धन प्राप्त हुनसक्छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – क्रोध, प्रतिशोध, रिसराग र उत्तेजना माथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ । निर्णय सार्थक हुनेछ । मित्रवर्गबाट सोचेजस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ । आम्दानीमा कमी आउने छैन, मनमा कताकता केही कमी भएझैं लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै हुनेछ । पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मकता नै देखिन्छ । मिथुन (का, कि, कु,
आज बिहीबारराम जानकि मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०६ गते बिहीबार
वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष ०६ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:३१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०८ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:२१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०२ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:३७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१२ बजे, कार्तिक शुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि, दिउँसो १२:३४ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्णिमा तिथि, भरिणी नक्षत्र, साँझ ०६:३१ बजेसम्म, त्यसपछि कृतिका नक्षत्र, चन्द्रमा मेष राशिमा, मध्यरात्रीपछि १२:३० बजेसम्म, त्यसपछि बृष राशिमा, वरीयान् योग, दिउँसो ०२:४३ बजेसम्म, त्यसपछि परिघ योग, वणिज करण, दिउँसो १२:३४ बजेसम्म त्यसपछि विष्टि (भद्रा) करण, आनन्दादि योग : पद्म, चन्द्रवर्ण : रातो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा :
मनकामना मन्दिर बनाउन १५ किलो सुन तयारी भयो यो मन्दिर जस्ले लाइक पछि शेयर गर्नु हुन्छ उसलाई सधै भरी सुख सान्ती मिल्नुका साथै मनले आटेको पुग्ने छ!ॐ ॐ ॐ
गोरखा । गोरखाको मनकामना मन्दिरको जीर्णोद्धारका क्रममा अहिलेसम्म १५ किलो सुन खर्च भएको छ । त्यतिले पनि मन्दिरको छानामा सुनको जलप लगाउन नपुगेपछि थप ३ किलो सुन खरिद गरिएको छ । ‘अहिले सम्म १५ किलो सुन खर्च भइसक्यो,’ जीर्णोद्धार समितिका संयोजक नरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले भने, ‘तीन किलो सुन नपुगेर काम रोकिएको थियो, अहिले सुन ल्याइसक्यौं, काम पनि भइरहेको छ ।’ मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि पुरातत्व विभागबाट निकासा भएको चार करोड रकमले सात किलो सुन खरिद गरिएको थियो । समितिले भक्तजनबाट संकलित रकमबाट थप आठ किलो सुन खरिद गरेर छाना बनाउने काम भइरहेको थियो । तर त्यसले पनि अपुग भएपछि तीन किलो सुन खरिद गरिएको श्रेष्ठले बताए । यसअघि मन्दिरको छानामा मात्र सुनको जलप लगाउने निर्णय भएको थियो । तर काम गर्दे जादा मूलढोका, कंकालको मूर्ति, तोरण र छानाछेउको मुकुटमा पनि सुनको जलप लगाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
— ज्योतिष,पंडित वेदनिधि तिमिल्सिना मेष साताको पहिलो दिन शनिवार शुभ रहेकोछ ।आयत निर्यात व्यापार व्ययवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आईतबार मध्यान्ह बाट मंगलबार अपरान्ह सम्म समय प्रतिकुल देखिन्छ । कहि कतैबाट मन चुडिने काम हुनसक्छन् । दुःखका रेखाहरु मेटाउन सकिने छैन । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । शेष साता शुभ रहेकोछ । अरुद्ध कामहरु अगाडि बढ्ने छन् । दुःख,कष्ट हरण हुनेछन् । दुर्जनहरुको पराजय हुनेछ । कार्य ्रक्षमता र लगनशिलता बढ्नेछ । प्रेरणादायक काम हुनेछन् । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । मित्रहरु सँग भेटघाट हुनेछ । बृष मंगलबार अपरान्ह सम्म समयले साथ दिनेछ काम गर्न पछि नहट्नु होला । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम मिल्नेछ । प्रेमिकाको प्रस्तावमा यात्रा हुनेछ । वैदेशिक काममा सफलता मिल्नेछ । तपाईको सुन्दरताले अरुको मन हरण गर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सन्तोषजनक आम्दा
मगर्नी भाउजूको कथा (13,505)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,490)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,059)